KDE Telepathy 0.6 Beta misy | Avy amin'ny Linux
Tsy isika rehetra no mampiasa ny rafitra mitambatra amin'ny tranokala toa Facebook, Gmail ary raha tsy izany. Izaho manokana dia aleoko mpanjifa fandefasan-kafatra amin'ny Desktop, satria mora kokoa amiko ny manangona ireo serivisy ampiasako amin'ny rindrambaiko tokana.
Ho ahy dia nantsoina ny mpanjifan'ny mpampita iraka Pidgin, noho ny antony maro, fa amin'ny KDE dia miasa amin'ny mpanjifany manokana miorina amin'ny Telepathy, mba hialana amin'ireo efa lany andro Kopete, ary efa ananantsika ny kinova 0.6 Beta.
Ity kinova vaovao ity dia misy fanatsarana maro, araka ny hitantsika eto Ity lahatsoratra ity ary asehoko azy ireo eto ambany:
Hatrany am-boalohany dia azonao atao izao ny manafatra ny kaonty sy ny rakitsoratra (log) avy any Kopete, noho izany dia tsy ho very ny toerana napetrakay. Mazava izao ny fampandrenesana ary haseho antsika kisary iray ao amin'ny lisitry ny fifandraisana rehefa misy hafatra vaovao tonga.
KTP izao dia mamela anao handamina fampandrenesana isan-karazany ho an'ny olona tsirairay ifandraisanao. Midika izany fa azo atao ny mametraka fampandrenesana tsy voatery raha mifandray ireo namanao tianao.
Nanatsara ny fitantanana ny teny miafina sy ny fiarovana azy ireo izy ireo. Nohatsaraina ny fitantanana ny fanamarinana serasera misy anay, ankehitriny dia mampiasa ny talen'ny serasera KDE SSL ary mamela ny mpampiasa hanilika ireo fanamarinana tsy mety.
Ny hafatra an-tsoratra dia azo soratana amin'ny sora-matevina na sora-mandry:
Ny horonan-tsary Youtube dia azo jerena mivantana eo amin'ny varavarankely fifampiresahana:
Ny rohy mankany amin'ny bugzilla dia aseho an-tserasera miaraka amin'ny lohatenin'ireo bibikely sy ny famahana azy:
Rehefa mandefa hafatra ianao dia afaka mampiasa hitsin-dàlan'ny klavier KDE hahamora kokoa ny fandefasana rohy:
Ny hafatra misy ny anaranao dia misongadina ary afaka mandefa fampandrenesana manokana miaraka am-peo:
Ankoatr'izany dia misy fanatsarana hafa. Ny fanovana dia atao eo ambanin'ny hood mba hiomanana amin'ny ho avy ary hanomezana hafainganana sy fitoniana bebe kokoa. Bug mihoatra ny 70 no namboarina. Ny fampandrenesana ny lesoka amin'ny fifandraisana sy ireo faritra manan-danja amin'ny mpampiasa dia naverina namboarina indray ary nanampy plugins maro hafa.
Raha ny filazan'ireo mpanamboatra dia miorina amin'ny fampiasana andavanandro ity beta ity. Misy fonosana haorina ankehitriny ho an'ny Fedora, Arch, Kubuntu, ary SuSE. Misy fonosana kaody loharano ao amin'ny Ity rohy ity ary mirakitra andiana fampiharana sy applet feno izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » KDE Telepathy 0.6 Beta misy
Mandra-pametrahan'izy ireo kisary ao amin'ny faritra fampandrenesana izay mandeha, tsy tahaka ilay iray ankehitriny izay tsy mahavita manafina ny varavarankely, hanohy amin'i Pidgin aho. Fa mahafinaritra ny manohy mivoatra ity tetikasa ity 🙂
Mamaly an'i gadi
Marina! Na dia, ny marina dia, tena tsy fahita firy amiko ny mampiasa an'io karazana fampiharana 😉
Eny, mbola mampiasa ny Kopete aho ary miaraka amina karazana kaonty dia manome olana ahy izany, rehefa mandroso kely kokoa ity tetikasa ity dia hiova aho hahita ny fomba 🙂
Manana OTR ve ianao?
izao rehefa namaky ity vaovao ity aho dia tsapako hoe mandra-pahoviana no tsy nampiasa serivisy fandefasan-kafatra amin'ny solosaina findainy. ary nanamarina fotsiny aho fa tsy manana napetraka ao Chakra ... hehe
Najanoko ny fampiasana azy satria tsy nahita fampiasa aho, nampiasa Pidgin niaraka tamin'ny Skype aho fa Skype izao no ampiasako rehefa mitambatra ireto roa ireto.
Miorina amin'ny Skype ve ny KDE Telepathy?
Tsy nametraka azy aho fa raha ny zavatra novakiako dia azo atao ny manampy kaonty Skype.
Hadinoko ny nilaza fa mila mametraka ny fonosana pidgin-skype sy Skype ianao (tsy misy hevitra raha mandeha izany).
Misafidy endrika famolavolana interface tsara aho, tena tsara kokoa ny kopete's, na dia kmess's aza.
@elav, hatramin'ny voalohany dia nampiasa emesene aho, saingy novakiako fa maro ny olona mampiasa pidgin sy ny solony hafa, amin'ny anao, inona ny tombony hitanao amin'ny pidgin raha oharina amin'ny hafa?
mifanentana be amin'ny saika ny serivisy fandefasan-kafatra eo no eo, ny plugins tena miovaova, ary amin'ny alàlan'izy ireo dia azo ovaina tokoa izany. Ampiasaiko amin'ny varavarankely io, fa amin'ny linux dia mampiasa kde telepathy aho hatramin'ny faran'ny taona lasa sy ny fiaraha-miory
Hanao fanandramana amin'ity fampiharana ity aho, mampanantena zavatra betsaka 😀 misaotra ny lahatsoratra
miasa amin'izany ve ny kaonferansa video facebook?
Ahoana ny fomba hahitana antontan-taratasy ao anatin'ny rafiko GNU / Linux ahy manokana